Warar Dheeraad ah oo kasoo baxaya Qaraxii ka dhacay Xabsi Dhexe ee Xamar. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Warar Dheeraad ah oo kasoo baxaya Qaraxii ka dhacay Xabsi Dhexe ee Xamar.
Warar Dheeraad ah oo kasoo baxaya Qaraxii ka dhacay Xabsi Dhexe ee Xamar.
Inta la Xaqiijiyey labo qof oo midkood ahaa Ruuxii is qarxiyey ayaa ku geeriyooday, halka qofka kalane uu ahaa Askari katirsan Ciidanka Dowladda oo la sheegay in uu ka hor tagaye ruuxa isasoo Miidaamiyey, lana sheegay in uu damacsanaa in uu galo Masjid ku yaala Xabsiga Dhexe ee Xamar oo ay ku Tukadaan Mas’uuliyiin katirsan Ciidanka Asluubta iyo Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
ilo Wareedyo ayaa Mustaqbal u Xaqiijiyey in ay jiraan Khasaare Dhaawac ah oo Soo gaaray Ciidamo katirsan Dowladda oo Afaafka hore ee Masjidka Ku sugnaa, Qofka is qarxiyey ayaa naloo sheegay in uu kamid ahaa Dhalinyaro Dhiboow ugu jiray Ciidamada Asluubta, inkastoo ilaa iminka Dowladda Xaqiijin.
Sareeye Gaas Max’ed Xuseen Cusmaan oo ah taliyaha Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed oo Sheegay in Qaraxaasi lagu Bartilmaameedsanaye ayaa sheegay in uu ka bad-baaday, Mid kamid ah Ilaaladiisane uu ku Geeriyooday.
Xarakada Al-Shabaab ayaa Sheegatay Mas’uuliyadda Weerarkaan, waxayna sheegtay in qaraxa ay ku geeriyoodeen Saraakiil katirsan Ciidanka Dowladda.